Fifehezana ny morontsiraka :: Tsy ampy ny fiarovana ny sisin-dranomasina • AoRaha
Fifehezana ny morontsiraka Tsy ampy ny fiarovana ny sisin-dranomasina
Vitsy ireo Tafika an-drano- masina malagasy. Tsy ampy ihany koa ny fampitaovana. Isan’ny mahatonga ny gabo- raraka amin’ny fidirana eto Madagasikara avy amin’ny alalan’ny sisin-dranomasina izany, araka ny nambaran’ ny sekretera ho amin’ny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana, ny Amiraly Lefitra Rakotoarisoa Marie Jean Lucien, nandritra ny fifampiarahabana nahatratra ny taonan’ireo Malagasy Tantsambo Fahiny (MATAFA) teny Marivolanitra, ny sabotsy lasa teo.
« Manodidina ny telon- jato fotsiny ny isan’ny tantsambo malagasy miahy ny fiarovana ny sisin-dranomasina. Midadasika amin’ny halavirana 5000km anefa ny moron- tsirak’i Madagasikara. Tsy ny tanora no tsy vonona fa ny isa faritan’ny fitondram- panjakana no mila hahitsy satria vitsy loatra », hoy hatrany ity Amiraly lefitra ity.
Efa ezaka vita ny fisian’ ny Ivon-toerana fanaraha-maso ny fari-dranomasina (CFIM) ka nahafahana nitsirika ny fihoaram-pefy eny amin’ ny sisin-dranomasina, toy ilay sambo sinoa tratra tany Toamasina. Tsy ampy izany na dia mbola eo ihany koa aza ny fampiofanana ataon’ ireo mpiara-miombona antoka amin’ny Malagasy.
Tsy ny fiarovam-pirenena manoloana izay mety hambana avy any an-drano- masina ihany no sahanin’ ny Tafika an-dranomasina fa eo indrindra koa ny fanenjehana ny jono tsy ara-dalàna sy ny fibodoana sisin-dranomasina ary ny maro samihafa.
« Vita ny fiarovana raha tena atao. Ny fahavononana sy ny fandaminana ary ny fandavan-tena no tena ilaina. Entanina kosa ny Malagasy rehetra, indrindra ireo miaina manamorona ny ranomasina mba ho saro-piaro amin’ ny tanindrazany satria ny fari-dranomasina dia tafiditra anatin’zany », araka ny fanampim-panazavana.
Fifehezana ny morontsiraka :: Tsy ampy ny fiarovana ny sisin-dranomasina - ewa.mg dit :
15/04/2019 à 23:19
[…] Fifehezana ny morontsiraka :: Tsy ampy ny fiarovana ny sisin-dranomasina est apparu en premier sur […]